Mogadishu Journal » Ra’iisul wasaaraha Soomaaliya oo soo gabgabeeyay booqashadii uu ku joogay magaalada Kismaayo
Mjournal :-Ra’iisul wasaaraha Soomaaliya,Xasan Cali Kheyre iyo golaha wasiirrada Soomaaliya ayaa maanta soo gabagabeeyay booqashadii ay ku joogen magaalada Kismaayo,kaddib markii ay saddex maalin ku sugnaayeen magaalada xeebta ku taalla ee xarunta gobolka Jubbada hoose.
Ra’iisul wasaaraha iyo wafdigiisa waxaa ku sagootiyay garoonka diyaaradaha ee magaalada Kismaayo,madaxweynaha dowlad-gobolleedka Jubbaland,Axmed Maxamed Islaam iyo mas’uuliyiin kale oo ka tirsan maamulka.
Saddexda maalin ee wafdiga uu joogay Kismaayo,waxaa maalin ka mid ah xarunta Jubbada hoose ay martigelisay shirkii ugu horreeyay golaha wasiirrada federaalka ee ka dhacay meel ka baxsan Muqdisho,taaso taarikhda ay ku galeyso magaalada ay ku shaqeeyaan maamulka Jubbaland.
Ra’iisul wasaaraha iyo golaha wasiirrada ayaa sidoo kale kulamo la qaatay wasiirrada iyo madaxda sare ee dowlad-gobolleedka,waxaa kalo dhacay kulan bulshada qeybaheeda iyo ra’iisul wasaaraha u dhaxeeyay.
Kheyre ayaa inta uu joogay Kismaayo aad u ammaanay Jubbaland iyo shacabka Kismaayo,isagoo marka si weyn ugu mahadceliyay sida loo soo dhaweeyay.
Shalay wafdiga waxaa loo sameeyay munaasabad qado ah oo lugu qabtay dulleedka Kismaayo,waxaa xigtay munaasabad sagootin ah oo xalay ka dhacday Kismaayo.
Gabagabadii,maalmaha ay wafdiga sare ee dowladda dhexe ku sugnaayeen Kismaayo waxaa ay ku qaaten nabadgalyo iyo xasilooni,taaso loo arkayo inuu maamulka Jubbaland ku muujinayey sida uu ugu guuleystay xasillinta xarunta gobolka Jubbada hoose.